“لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ” – Waa qayb kamid ah aayad kursiga oo ah aayada 255-aad ee suurada Al-baqra. | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so, October 24, 2015
Afrikaan.so, July 23, 2020
Bukhaari Xirsi Faarax — September 15, 2020
“لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ” – Waa qayb kamid ah aayad kursiga oo ah aayada 255-aad ee suurada Al-baqra, Eebe wuxuu isku tilmaamay in aanay lulo iyo hurdo midna qaban.
Lulada iyo hurdadu waa astaamo biological ah oo insaanku leeyahay, kana qayb qaata sii socoshada nashaadka jireed iyo kan maskaxeed ee bini’aadamka.
Aayada oo aan mudo badan aqaanay macnaheeda in badanna akhrin jiray ayaa maanta waxaa wax igu cusub noqday tacbiirka ah ” لا تَأْخُذُهُ” erayga qabasho wuxuu tilmaamayaa awood, wax aan awood lahayn wax ma qabtaan, hadaba aayadu waxay qiraysaa in hurdadu ay leedahay awood wax qabata, sidaas darteed waxaa jira awooda hurdada.
Hadaba is-waydii awooda hurdada qabashadeeda ma ka baxsan karnaa? Mudo intee le’eg ayaan se ka meer-meeraysan karnaa? Bal is-waydii imisa cisho ayaad hurdo la’aan ahaan kartaa? Hadaad se isku daydo inaadan seexan hurdadu ma ku dayn doontaa mise way ku qaban doontaa iyadoo aan kula tashan?
Buuga records-ka caalamiga ah lagu kaydiyo ee “Guinness World Records” wuxuu qoray in “Randy Gardner” uu yahay qofka record-ka soojeed ee ugu dheeraa taariikhda loo hayo, Gardner isku-daygiisa soojeed wuxuu qaatay 264.4 saacadood oo u dhiganta 11 maalmood iyo 25 daqiiqo.
Gardner wuu awoodi waayay mudo intaas ka sii badan in uu awooda hurdada iska caabiyo, saas oo ay tahay hal-ganka adag ee uu awoodaas aakhirkii ka adkaatay la galay waxay waxyeelo gaarsiisay fayoobida hadalkiisa, awoodiisa xalinta masaa’isha fudud ee caqliga iyo qayb kamid ah dareemayaashiisa kale sida urka iyo taabashada.
Markaan hannaanka nolosheena dib u eegno waxaan arkaynaa in hurdadu tahay xalqad lagama maarmaan ah oo hannaankaas ka tirsan isla markaas na leh awood wax qaharta insaankana sandulaysa oo uusan ka baxsan karin qabashadeeda, waxaa taas sii dheer in hurdadu ay tahay nusqaan sababtoo ah qofku marka uu hurdo wacyiga ayay hurdadu ka qaadaa qofkuna wuxuu noqdaa mid aan waxba ogayn.
Hada ayaynu si fiican u garan karnaa sababta ay jumladani ” لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌُ” u noqonayso ammaan uu Eebe wayne isku amaano, Rabbiga maamulaya kowkan oo dhan awooda ugu saraysana leh ma haboona in ay jirto awood isaga ka saraysa oo qabata, sidoo kale Rabbiga kownkan maamulkiisa haya mas’uulkana ka ah sikin walba waxa ka dhex-dhacaya ma haboona in ay qabtaan lulo iyo hurdo oo ah nusqaan wacyiga maqnaysiisa.
Tags: "لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ" - Waa qayb kamid ah aayad kursiga oo ah aayada 255-aad ee suurada Al-baqra.
Next post Xeerka Isa soo-jiidasho ee Lamaanaha!!!
Previous post Falanqeyn: Shacabka Reer Afgooye Miyaysan Nasab-ahayn?